Semalt: पत्रकारहरूका लागि पाँच अद्भुत पाठ स्क्र्यापिंग अनुप्रयोगहरू
एक पत्रकारले नियमित आधारमा सामग्री स col्कलन, लेख्ने र वितरण गर्ने काम गर्दछ। ऊ / उनी मुख्यतया सामान्य मुद्दाहरू, राजनीतिक मुद्दाहरू, वा प्राकृतिक प्रकोपहरूमा केन्द्रित हुन्छन्। धेरैजसो पत्रकारहरूले मनोरञ्जनको संसारमा समाचारहरू छोप्दछन्, जबकि अन्य खेल र खेलकुदको बारेमा कुरा गर्छन्। एक पत्रकारले एकै साथ धेरै टेक्स्ट स्क्र्यापि tasks कार्यहरू गर्नुपर्दछ; ऊ / उनीले डाटा मात्र निकाल्दैनन् तर एक हदसम्म यसको शुद्धता र वैधता पनि सुनिश्चित गर्दछ। पत्रकारहरू कहिलेकाँही आफैलाई खतरामा पार्छन र बढी र अधिक पाठकहरूलाई संलग्न गराउन समाचार लेखहरू लेख्छन्। यदि तपाईं एक पत्रकार बन्न चाहानुहुन्छ र आधारभूत प्रोग्रामि skills सीपको अभाव छ भने, तपाईं निम्न अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको काम पूरा गर्नका लागि।
स्क्र्यापर एक उत्तम र सब भन्दा उपयोगी पाठ र छवि स्क्र्यापि services सेवाहरू हुन्। यो प्रयोग गर्न सजिलो छ र प्रयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेसको साथ आउँदछ। स्क्र्यापरको साथ, पत्रकारहरूले एकै समयमा धेरै वेब पृष्ठहरू लक्षित गर्न सक्दछन् र सम्पूर्ण वा आंशिक साइटहरूबाट डाटा निकाल्न सक्छन्। स्क्र्यापर आफ्नो मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजीको लागि प्रख्यात छ र सीएनएन, बीबीसी र अन्य समान वेबसाइटहरूबाट सादा पाठ निकाल्छ। तपाईले यो डाटा गुगल डक्स, CSV वा JSON फाईलमा निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ। यसले टेक्स्टको गुणस्तर मूल्या quality्कन गर्न XPath प्रयोग गर्दछ।
२. आउबिट हब:
आउटविट हब दुबै पत्रकार र गैर प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ। यस अनुप्रयोगबाट फाइदा पाउन तपाईंले पायथन, सी ++ वा रूबी सिक्नुपर्दैन। यो मुख्यतया फायरफक्स विस्तार हो र तपाईंको लागि पाठ फाइलहरू, PDF हरू, HTML कागजातहरू र छविहरू स्क्र्याप गर्दछ। आउन्डविट हबले सटीक परिणाम दिन्छ र सुविधाजनक रूपमा विभिन्न वेबसाइटहरूको सूचकांकमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाईं विकिपेडिया पृष्ठहरू, अनलाइन जर्नलहरू, समाचार वेबसाइटहरू र ई-वाणिज्य साइटहरूबाट डाटा निकाल्न Scraperwiki प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक ब्राउजर-आधारित अनुप्रयोग हो कि तुरून्त त्रुटि मुक्त परिणाम प्रदान गर्दछ। यदि तपाईंसँग कुनै कोडि knowledge ज्ञान छैन भने, Scraperwiki तपाईंको लागि सही विकल्प हो। यस सेवाको साथ, पत्रकारहरूले सम्पूर्ण साइटलाई स्क्र्याप गर्न सक्दछन् र केही सेकेन्डमा डाटा आफ्नो हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्न सक्दछन्। Scraperwiki को क्लासिक संस्करण अनुप्रयोग विकासकर्ताहरू, फ्रीलांसरहरू र वेबमास्टरहरूको लागि उपयुक्त छ।
Import.io इन्टरनेट मा एक उत्तम र सबै भन्दा उपयोगी पाठ स्क्र्यापिंग सेवा हो। यसले पत्रकारहरूलाई ट्रेंडिंग शीर्षकहरू खोज्न, डेटा ठीकसँग निकाल्न र मिनेटमा उनीहरूको आफ्नै वेबसाइटहरूमा प्रकाशित गर्न मद्दत गर्दछ। Import.io को साथ तपाईले दुबै टेक्स्ट र JPG फाईलहरू स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि स्थापना र सक्रिय भएपछि, यो उपकरणले एक पटकमा दुई हजार पाठ स्क्र्यापि projects परियोजनाहरू शुरू गर्दछ। दिईएको यूआरएलबाट सामग्री ल्याउन यसले राम्रो काम गर्छ र कुनै पनी मुद्दा बिना डाटा पार्स गर्न दिन्छ।
Kim. किमोनो ल्याबहरू:
Import.io जस्तै, किमोनो ल्याब्सले ठूलो संख्याका साइटहरू लक्षित गर्दछ। यो इन्टरनेट मा एक पूर्ण पैमाने पर टेक्स्ट स्क्रेपर र वेब क्रलरको रूपमा काम गर्दछ। तपाईंले भर्खर URL उल्लेख गर्नुपर्दछ जुन तपाईंबाट जानकारी निकाल्न चाहनुहुन्छ, र किमोनो ल्याब्सले केहि मिनेटमा इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्दछ। यो राम्रोसँग यसको मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजीको लागि परिचित छ र पत्रकारहरूको लागि उपयुक्त शीर्षकहरू फेला पार्न इन्टरनेटको वरिपरि खनेर। तपाईं छवि र पाठ फाईलहरू गुगल कागजातमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ वा सिधा तपाईंको कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।